SQL Server Kudzoreredza Turu. SQL Server Repair Software. MDF Kugadzirisa Turu.
Sei DataNumen SQL Recovery?
Kudzoreredza mwero ndiyo most kukosha kwakakosha kweSQL chigadzirwa chigadzirwa. Zvinoenderana nemiedzo yedu yakazara, DataNumen SQL Recovery ine yakanakisa kupora mwero, zvirinani kupfuura chero vamwe vakwikwidzi mumusika!
Dzidza zvakawanda nezvekuti sei DataNumen SQL Recovery inoputa kukwikwidza
Zviri nyore kushanda, zvinoreva kuti zvinoshamisa. Ndinokutendai zvikuru, kunyanya nekuti kana zvisina kudaro ndingadai ndisina kukwanisa kutora mumuviri mafaera andaifanira kuita
Mangwani akanaka. Ndiri kuyedza software yako kugadzirisa sql dhatabhesi. Mushure mekumhanyisa maturusi ako ini ndave kukwanisa kuona dhata rangu rese zvakare :)
CEO & Muvambi weHey Flyer
Mhinduro Yekutevera Zvakajairika Zvikanganiso uye Matambudziko mu SQL Server MDF Faira
xxx.mdf Haisi Yekutanga Dhatabhesi Faira
xxx.mdf Haisi Yechokwadi Dhatabhesi Faira Musoro
Sql Server Yakacherechedzwa A Logical Consistency-Yakavakirwa I / O Kanganiso: Isiriyo Checksum
Sql Server Yakacherechedzwa A Logical Consistency-Yakavakirwa I / O Kanganiso: Yakabviswa Peji
Dzorera Kudzima Rekodhi kana Matafura muDhatabhesi
Zvinhu Zvikuru mu DataNumen SQL Recovery v6.0
tsigira SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019.
Tsigiro yekudzosera chimiro nedata mumatafura.
Tsigiro yekudzosera ese data mhando, kusanganisira XML mhando.
Tsigiro kudzoreredza sparse ikholamu.
Tsigiro yekudzosera marekodhi akadzimwa.
Tsigiro yekudzosera indekisi nemakiyi ekutanga.
Tsigiro yekudzosera maonero, zvinokonzeresa, mitemo uye zvisizvo.
Tsigiro yekudzosera akachengetedzwa maitiro, scalar mabasa, inline tafura-yakakosheswa mabasa uye multistatement tafura-yakakosheswa mabasa.
Tsigiro yekudzosa uye kubisa zvakanyorwa zvinhu.
Tsigiro yekudzosera akawanda mafaera, kusanganisira MDF faira uye ayo akabatana NDF mafaera.
Tsigiro yekuburitsa yakadzosa dhata mune MDF faira.
Tsigiro yekudzosera MDF / NDF dhata kubva kune isina kukuvara kana kukuvara VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) mafaera (*. Vmdk), Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) mafaera (*. Vhd), Acronis True Image mafaera (*. Tib), Norton Ghost mafaera (*. gho, * .v2i), Windows NTBackup mafaera (*.bkf), ISO mafaera emifananidzo (*. Iso) uye Nero mafaera emifananidzo (*. Nrg).
Kutsigira kuti uwanezve SQL Server data kubva temporary tempdb.mdf faira.
Tsigiro yekudzosera MDF uye NDF mafaera akakura se16TB.
Yakabatanidzwa neWindows shell, kuti iwe ugone kugadzirisa iyo MDF faira ine mamiriro (kurudyi tinya) menyu yeWindows Explorer nyore.
kushandisa DataNumen SQL Recovery Kupora Uori SQL Server Databases
Kana zvako SQL Server MDF mafaera akaora kana kukuvara uye haugone kuvhura zvakajairika, unogona kushandisa DataNumen SQL Recovery kuti utarise mafaera eMDC uye uwanezve yakawanda data kubva kwavari sezvinobvira.
Cherechedza: Usati wadzorera chero yakaora kana kukuvara mafaera eMDF ne DataNumen SQL RecoveryNdokumbirawo muvhare chero mamwe maapplication anogona kugadzirisa mafaira eMDF.
Sarudza iyo yakaipa kana yakakuvara MDF faira kuti igadziriswe.
Iwe unogona kuisa zita reMDF faira zvakananga kana tinya iyo
bhatani kuti uwane iyo MDF faira kuti igadziriswe pakombuta yemuno.
Kana paine imwe kana yakawanda NDF mafaera inosanganisirwa neyakanganisika MDF faira, ipapo unogona kuvawedzera futi:
Kana iwe uchiziva fomati yeiyo sosi yakakuvadzwa MDF faira, ipapo unogona kuijekesa.
Kana iwe ukasadoma fomati, ipapo nekutadza, DataNumen SQL Recovery ichaedza kuongorora iyo sosi MDF faira uye kuona fomati otomatiki.
By default, DataNumen SQL Recovery ichachengeta iyo yakamisikidzwa MDF faira mune nyowani faira inonzi xxxx_fixed.mdf, uko xxxx izita renyaya MDF faira. Semuenzaniso, kune sosi MDF faira Damaged.mdf, iro zita rekutanga reiyo yakagadziriswa faira ichave Yakakuvadzwa_fixed.mdf. Kana iwe uchida kushandisa rimwe zita, ndokumbira usarudze kana kuriseta saizvozvo:
Mushure mekudzoreredza maitiro, unogona start SQL Server Management Studio uye uwane iyo inoenderana yakadzoserwa dhatabhesi.
bhatani, DataNumen SQL Recovery inokurudzira "Unganidza ku SQL Server"dialog box, sezviri pazasi:
Iwe unofanirwa kuseta iyo Zita reSeva uye Authentication nokuti SQL Server semuenzaniso pakombuta yemuno kana iri kure, wobva wadzvanya bhatani "OK". Ipapo DataNumen SQL Recovery kuda start kuongorora uye kugadzirisa iyo sosi MDF faira. Kufambira mberi kubhawa
Mushure mekudzoreredza maitiro, kana iyo sosi MDF faira ikawanikwazve zvinobudirira, iwe uchaona meseji bhokisi rakadai.
Iye zvino iwe start SQL Server Management Studio uye uwane iyo data mune yakadzoserwa MDF dhatabhesi.
Tsigiro yekurangarira marongero ekubatanidza.
Tsigiro yekudzosera makiyi ekutanga.
Tsigiro kudzoreredza iyo isingabvisike pfuma yekoramu.
DataNumen SQL Recovery 5.9 inoburitswa muna Chivabvu 3, 2021
DataNumen SQL Recovery 5.4 inoburitswa muna Zvita 15, 2020
DataNumen SQL Recovery 5.2 inoburitswa munaNovember 2nd, 2020
DataNumen SQL Recovery 5.1 inoburitswa muna Chikunguru 11th, 2020
tsigira SQL Server 2019.
DataNumen SQL Recovery 5.0 inosunungurwa munaJune 5, 2020
DataNumen SQL Recovery 4.5 inoburitswa muna Kubvumbi 25, 2020
DataNumen SQL Recovery 4.4 inoburitswa munaKurume 9th, 2020
Tsigiro yekudzosera XML data.
DataNumen SQL Recovery 4.3 inoburitswa muna Zvita 31, 2019
DataNumen SQL Recovery 4.2 inoburitswa munaGunyana 8th, 2019
DataNumen SQL Recovery 4.1 inoburitswa muna Kubvumbi 11, 2019
DataNumen SQL Recovery 4.0 inoburitswa muna Zvita 8, 2018
DataNumen SQL Recovery 3.2 inoburitswa muna Gumiguru 10, 2018
DataNumen SQL Recovery 3.0 inoburitswa muna Nyamavhuvhu 15, 2018
Natsiridza mashandiro mukugadzirisa dhata hombe.
Deredza iyo yekushandisa memory mukugadzirisa hombe data.
DataNumen SQL Recovery 2.8 inoburitswa munaKurume 6th, 2018
tsigira SQL Server 2017
DataNumen SQL Recovery 2.7 inoburitswa munaKurume 26th, 2017
tsigira SQL Server 2016.
DataNumen SQL Recovery 2.6 inoburitswa munaFebruary 3, 2017
Tsigiro yekugadzirisa zvimwe zvikanganiso zve database.
DataNumen SQL Recovery 2.5 inoburitswa muna Kukadzi 12, 2016
DataNumen SQL Recovery 2.4 inoburitswa muna Gumiguru 1, 2014
DataNumen SQL Recovery 2.3 inoburitswa muna Chivabvu 12, 2014
Tsigiro yekudzosera MDF / NDF dhata kubva kune isina kukuvara kana kukuvara VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) mafaera (* .vmdk), Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) mafaera (* .vhd), Acronis True Image mafaera (* .tib), Norton Ghost mafaera (* .gho, * .v2i), Windows NTBackup mafaera (*.bkf), ISO mafaera emifananidzo (* .iso) uye Nero mafaera emifananidzo (* .nrg).
DataNumen SQL Recovery 2.2 inoburitswa munaKurume 18, 2014
DataNumen SQL Recovery 2.1 yakaburitswa muna Ndira 9, 2014
tsigira SQL Server 2014.
DataNumen SQL Recovery 2.0 inoburitswa muna Zvita 7, 2013
DataNumen SQL Recovery 1.1 inoburitswa muna Nyamavhuvhu 3, 2013
Tsigiro kuburitsa faira mune MDF fomati.
DataNumen SQL Recovery 1.0 inoburitswa muna Chivabvu 11, 2013
tsigira SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2012.
Tsigiro yekudzosera ese data mhando, kunze kweiyo XML mhando.